လေ့လာမှုတိုင်းမှာ အာရုံမလွင့်ကြဖို့ – Live the Dream
စာ‌‌တွေကို အာရုံမစိုက်နိုင်တဲ့ရောဂါက ကျောင်းသားဖြစ်နေသ၍ ခံစားရတဲ့ရောဂါတစ်ခုပါ။ ကျောင်းသားလို့ ဆိုလိုပေမယ့် lifelong Learning ဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ Personal Development အတွက်တော့ ပညာရပ်တွေကို ဆက်ပြီး သင်ယူနေကြရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အလုပ်ခွင်ထဲရောက်နေပေမယ့် ပညာရပ်တွေကိုဆက်လက်သင်ယူလေ့လာနေရတဲ့သူတွေလည်း အာရုံမစိုက်နိုင်တဲ့ပြဿနာရှိကြပါတယ်။
ဘာကြောင့်အာရုံမစိုက်နိုင်လဲဆိုတာ ကို အဖြေတိုက်နေရင်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီပြဿနာကို မဖြေရှင်းပဲထားလို့မရပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မင်မင်ဖတ်မိသမျှစာတွေ Survey ကောက်သမျှတွေထဲကနေ လေ့လာမှုကို အာရုံစိုက်နိုင်မယ့် Tips လေးတွေကို ပေးချင်ပါတယ်။ General ဆန်ပေမယ့် မိမိအတွက်အကျိုးဖြစ်စေမယ့် အချက်လေးတွေပါရင်တော့ မင်မင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပြီးပြည့်စုံလှပါပြီနော်… အိုကေ ကြည့်လိုက်ရအောင်..
၁. ကိုယ့်ရဲ့ Moodကို နားလည်ပါ
ကြားဖူးနေကြ စကားထဲက မြန်မာတွေက တစ်ယောက်ထဲနေရင် ပျင်းတယ်။ နှစ်ယောက်ဆိုစကားများတယ်။ သုံးယောက်ဆိုရန်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုမြန်မာမှုကိုတော့ နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ ပြောချင်တဲ့မြန်မာမှုနားလည်ပါဆိုတာက အဲ့သည်အရာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာခြင်းမှာ အာရုံပျက်လွယ်တယ်။ နှစ်ယောက်ဆိုစကားများတယ်ဆိုကြပါစို့.. ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ လေ့လာမှုလုပ်မယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကို သီးသန့်နေရာလေးထားပေးဖို့လိုပါတယ်။
အဲ့လိုပြောလို စာလေ့လာမယ့် တိတ်ဆိတ်နေရမယ်..ကျေးငှက်တွေနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့တောအုပ်လေးလိုဖြစ်ရမယ် ဆိုတာမျိုးကို မတွေးပါနဲ့နော်။ အဓိကက တစ်ခြားသူတွေအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေမယ့်နေရာ၊ တိတ်ဆိတ်မနေရင်တောင် အရမ်းဆူညံနေမယ့်နေရာ၊ စာလုပ်ဖို့ Motivation ပေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကို ရှာဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့သဘောသဘာဝဆိုတာကိုပြောင်းလဲဖို့ခက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို နေရာပြောင်းတာ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းရှာတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အာရုံပျက်လွယ်တဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာ အချိန်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းတာလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်မယ် ညာလုပ်မယ်.. စသည်ဖြင့် စာရွက်တွေထဲ ကျကျနနရေးဆွဲ ဖုန်းတွေထဲမှတ်ထား တာမျိုးတော့ ခဏခဏ လုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဆုံးမှာ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ မပြီးတာမျိုးတွေကြောင့် စာလုပ်ဖို့ အားပျက်ရပါတယ်။ ဒါက Time Mangement မှားတယ်လို့ပြောလို့ရသလို ကိုယ့်အတိုင်းအတာ ကိုယ်နားမလည်တာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာလေ့လာတဲ့အချိန်ဇယားရေးဆွဲတဲ့အခါ Confidence Level တွေ so high ပြီး ပိုတွက်တာမျိုးရှောင်ကြပါ။ လုပ်နိုင်တဲ့ effort နဲ့ သုံးမယ့်အချိန်ကို မျှတစေပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ဖိအားပေးတယ့် အချိန်ဇယားမျိုးပဲမဖြစ်စေပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်စေပါ။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့သွားတဲ့ လေ့လာမှုက ဘယ်တော့မှ အာရုံစိုက်နိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို ဦးဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ကသာ ဦးဆောင်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါစေနော်…
၃. Flexible ဖြစ်လွန်းရင်
အားနာရင် ခါးပါတတ်တယ်လို့ ဘယ်သူပြောပြော စာလုပ်တဲ့အချိန် တစ်ယောက်က စားဖို့ သောက်ဖို့ ပျော်ဖို့ပါးဖို့ ခေါ်ရင် ချိဖတို့ ချိမတို့ လိုက်သွားတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား? ဒီလို Flexible ဖြစ်လွန်းတာတော့ အဆင်မပြေပါဘူးနော်. ကိုယ့်ရဲ့ လေ့လာမှုက ကိုယ့်အတွက် အမှန်တကယ်အကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆရင်တော့ အနှောင့်အယှက်တွေကို ငြင်းတတ်အောင်သင်ယူပါ။ မလိုက်လျောလိုက်လို့ စိတ်ဆိုးမယ်လို့တော့မပြောပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ကလေးလေးတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်သင့်တဲ့အချိန်ပျော်ပြီး ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် လေ့လာမှုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကိုလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပေးရပါတယ်။
အတတ်နိုင်ဆုံး Flexible ဖြစ်လွန်းတာမျိုးကိုရှောင်ပါ။ ပြီးတော့ သူများလေ့လာမှုအချိန်ကို အထိပါးမခံနိုင်လို့ ကိုယ့်က စိတ်ဆိုးတတ်မယ်ဆိုရင် တကယ်ရှက်စရာကိစ္စဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလိုအကျင့်ဆိုးရှိနေတယ်ဆိုရင် ဖျောက်ပစ်ပါနော်..
General ဆန်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ သိပ်ဂရုမစိုက်တဲ့အချက်ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ စာကြည့်စားပွဲ၊ လေ့လာမှုလုပ်မယ့်နေရာကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရမယ် ဆိုတဲ့အချက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်စာလေ့လာတဲ့အချိန်ကျမှ အချိန်ဇယားထ ဆွဲတာ၊ ဘောပင်ခဲတံ အစရှိတဲ့ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းရှာရတာ၊ စာကြည့်မယ့်နေရာက ရှုပ်ပေပွနေတာက ကျွန်တော်တို့ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ လေ့လာမှုအပေါ် လွယ်လွယ်လေးအာရုံပျက်စေနိုင်ပါတယ်။
စာမလုပ်ခင်မှာ လိုအပ်တဲ့ Accessories တွေကို ပြင်ဆင်ထားမယ်။ စာကြည့်မယ့်နေရာလေးကို လည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးနဲ့ ဆိုရင် အာရုံနောက်စရာ တွေကို လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စာကို ထိုင်ပဲကြည့်ကြည့် လဲပဲကြည့်ကြည့် ကိုယ့်အတွက် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေဖို့ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နဲ့အဆင်သင့်ရှိနေဖို့က အဓိကမို့ ဒါကိုလည်း ဂရုစိုက်ပါနော်…
လူတွေပဲ…..! ကိုယ်ကြိုက်တာကို ကိုယ်လေ့လာချင်တဲ့ ခံစားချက်မျိုးတော့ လူတိုင်းရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Passion ဖြစ်တဲ့ ပညာရပ်တွေကို လေ့လာလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရှိကြလို၊ ဘဝပေးအခြေအနေတွေကြောင့် လေ့လာမျိုးလည်း ရှိတယ် ဟုတ်။ ဒါ့ပေမယ့် Passion မဖြစ်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်လေ့လာမှုအပေါ်အပြစ်တင်တာမျိုးကို မလုပ်ပါနဲ့။ ပညာရပ်တစ်ခုစီတိုင်း လေ့လာရတဲ့အကြောင်းရင်း၊ လေ့လာမှုအဆုံးမှာရှိတဲ့ပန်းတိုင်က ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးအတွက်ချည်းပဲဆိုတာကို သိမှတ်ရင် တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ တန်ဖိုးထားလေ့လာကြဖို့လိုပါတယ်။ ဆိုတော့ Passion မဖြစ်တဲ့အရာကို လေ့လာနေရ လို့ ကိုယ့်မှာအာရုံအပြည့်အဝမထားနိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီပညာရပ်သင်ယူခြင်းရဲ့အနှစ်သာရ၊ ရလာမယ့် ရလာဒ်ရဲ့တန်ဖိုးကို ပြန်မြင်တတ်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ..ဒီလို ပြန်မြင်တတ်ခြင်းက ကိုယ့်ကို ခွန်အားပေးနိုင်ပြီး ပြန်လည်အာရုံစိုက်လာနိုင်ဖို့ တွန်းအားဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။